चरेशसहित पक्राउ पश्चिम रुकुम, पश्चिम रुकुमको आठबिसकोट नगरपालिका १३ स्थित घेट्माबाट कार्तिक २७ गते एपीएफ टोली र नेपाल प्रहरीले करिव एक के.जी. सात सय ग्राम चरेशसहित एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा सोही ठाउँ बस्ने ७० वर्षिय धनसिंह पुन छन् । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नम्वर ४७ गुल्म हेक्वा पश्चिम रुकुमबाट खटिएको एपीएफ टोली र नेपाल प्रहरीले निज पुनको घरमा लुकाई छिपाई राखेको अवस्थामा उक्त चरेशसहित उनलाई पक्राउ गरिएको हो । पक्राउ परेका पुनलाई बरामद चरेशसहित आवश्यक कारवाहीको लागि ईलाका प्रहरी कार्यालय आठबिसकोटमा बुझाईएको छ ।
पश्चिम रुकुम, पश्चिम रुकुमको आठबिसकोट नगरपालिका १३ स्थित घेट्माबाट कार्तिक २७ गते एपीएफ टोली र नेपाल प्रहरीले करिव एक के.जी. सात सय ग्राम चरेशसहित एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा सोही ठाउँ बस्ने ७० वर्षिय धनसिंह पुन छन् । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नम्वर ४७ गुल्म हेक्वा पश्चिम रुकुमबाट खटिएको एपीएफ टोली र नेपाल प्रहरीले निज पुनको घरमा लुकाई छिपाई राखेको अवस्थामा उक्त चरेशसहित उनलाई पक्राउ गरिएको हो । पक्राउ परेका पुनलाई बरामद चरेशसहित आवश्यक कारवाहीको लागि ईलाका प्रहरी कार्यालय आठबिसकोटमा बुझाईएको छ ।